Etu etu ọnụahịa ụlọ ahịa si emetụta AdWords Merchants | Martech Zone
Google weputara atụmatụ AdWords na ngwụcha ọnwa Julaị iji nyere ndị na-azụ ahịa aka ịme mkpebi ịzụrụ nke ọma. Ndepụta Ndepụta Ngwaahịa (PLA) n'ofe Google.com na Ịzụ ahịa Google ga - enwe ngwa ahia ma obu Google.
Chee echiche na Amazon na nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ị ga-ahụ mgbe ị na-achọ ngwaahịa na ọrụ na Google. Ntụle ngwaahịa a ga-eji sistemụ kpakpando 5 mee ihe na nyocha dị mkpa.
Ka anyị kwuo na ị nọ n’ahịa maka onye na-eme kọfị ọhụrụ. Mgbe ị Google chọọ ngwaahịa a, nsonaazụ ga-enye gị ndepụta nke ngwaahịa ndị dịnụ yana ọkwa ha na nyocha ha. Ihe omuma ohuru a nke Google di maka ndi ahia na United States n'oge a.
Olee etu akara aka si enyere ndị ahịa aka
Maka ndị na-azụ ahịa, uru ya doro anya. Site na iji ọkwa dị iche iche na ngwaahịa na ọrụ, mkpebi ịzụta nwere ike ịmatakwu ma nwee ike mechaa ngwa ngwa. Ndị na-azụ ahịa ekwesịghị ịgafe nyocha niile iji chọpụta etu otu ngwaahịa si emetụta ndị ahịa ndị ọzọ.
Ozi dị oke egwu nke na-enyere ndị ahịa aka ikpebi ihe dị mfe ịchọta. Ọ dịghị mkpa ka ndị na-azụ ahịa mee nyocha ọzọ n'ihi na nyocha ngwaahịa dị ebe ahụ na Mgbasa ozi Ndepụta Ngwaahịa maka atụmatụ AdWords ọhụrụ.
Uzo n'umu ahia si emetuta ndi ahia
Karịa ihe AdWords ọhụrụ ahụ na-eme maka ndị na-azụ ahịa, a na-ekwenye na ọkwa ngwaahịa bara uru maka ndị ahịa n'ọtụtụ ụzọ. Site na ntinye ahazi ngwa ahia na oru di iche iche na nchoputa Google, Mgbasa ozi Ndeputa Ngwa ahia nwere ike inyere aka meputa ahia ndi ahia kariri. Nnwale ndị izizi na beta gosikwara ịrị elu pasent 10 na ntinye-pịa-na ọnụọgụ Mgbasa ozi Ndepụta.
Iji gosipụtakwu, ka anyị laghachi n'ihe atụ nke onye na-eme kọfị. Mgbe ị na-achọ ihe ahụ na Google.com ma ọ bụ Shozụ ahịa Google, ihe ndị ahịa ga-ahụ bụ ndepụta nke nsonaazụ ịzụ ahịa nkwado. Otu ihe nwere ike ịnwe akara kpakpando anọ na nyocha ndị ọrụ 230. Ọzọ nwere akara kpakpando 4.5 na 3,427 nyocha na ihe ndị ọzọ. Google kewapụrụ ihe ndị ahụ ọzọ kasị ewu ewu na ndị mmadụ tụlekwara.
Mgbe ndị na-azụ ahịa pịa na akara, a na-ebute ha na windo ọhụrụ ebe enwere nkọwa ndị ọzọ gbasara ọkwa. Nkwupụta miri emi nwere ike ịgụnye nkọwa dịka ọrụ ndị ahịa, njikwa na-ekwu maka ya, ego, ụgwọ, izu ike ịzụta, ogo weebụ yana n'ezie, afọ ojuju zuru oke. Ihe ọzọ dị na windo a bụ njikọ na ebe obibi ndị ahịa na-abawanye ohere maka ịpị-pịa.
AdWords Product Ratings, na nkenke, na-enye ndị ahịa ụzọ ọzọ iji pụọ na asọmpi ahụ na-abawanye pasent CTR ma mechaa nweta uru.
Ebe Google nwetara data
Inyere ndị na-azụ ahịa aka ime mkpebi site na iji usoro ịzụ ahịa Google eme ihe mgbe ị na-emewanyewanye ngosi ngwaahịa gị na CTR niile dị mma. Mana olee otu iwu si dị n'eziokwu? Ebee ka data maka ọkwa a si bịa?
Dị ka Google si kwuo, Ngosipụta ngwaahịa bụ nchịkọta nke akara na nyocha data sitere n'ọtụtụ isi. Atkpụrụ nwere ike ịbịa site na ndị ahịa, ndị ọrụ, ndị na-achịkọta ndị ọzọ na saịtị nchịkọta akụkọ jikọtara ọnụ iji gosipụta mkpokọta mkpokọta nchịkọta nke ọkwa.
Data, na ndị ọzọ okwu, na-abịa tumadi si Nyocha ndị ahịa Google nke bu uzo igwe nyocha iji nweta nzaghachi ndi ahia. Ntụle ikpeazụ nke egosiri na nsonaazụ ọchụchọ na-adaberekarị na nyocha 1,000. A na-etinyekwa mmelite oge niile dị ka echiche zuru ezu na ụlọ ọrụ, ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ.
Onye nwere ike iji akara ngosi ngwaahịa
Ogo maka Mgbasa ozi Ndepụta Ngwaahịa bara uru naanị maka ndị ahịa na ndị mgbasa ozi na-elekwasị anya ndị ahịa US. Iji mee ka njirimara ahụ nwee, ndị ahịa ga-ahọrọ ịkọrịrị data nyocha ha niile na Google ma ọ bụ site na ndị nchịkọta nke atọ. Nkwado ndị ọzọ nke atọ akwadoro Bazaarvoice, Ekomi, Feefo, Ike Nyocha, Reevoo, Ntughari, Kwadoro, Tụgharịa, Nyocha Nyocha, Echiche, Yotpo.
Ndị ahịa ga-enwerịrị opekata mpe nyocha atọ iji tozuo. Google na-enyekwa ndị ahịa ohere zuru oke iji kpebie ma ha ga-ekerịta ọdịnaya nyochaa ma ọ bụ na-amalite site na mbubreyo July ruo Ọktọba. N'oge a, ihe Mgbasa ozi Ndepụta Ngwaahịa niile ga-enwe ọkwa njirimara ngwaahịa egosipụtara maka ndị nwere data nyocha. Bịa na Nọvemba, a ga-egosipụta ọkwa ngwaahịa naanị ma ọ bụrụ na onye ahịa ahụ ahọrọ ịkekọrịta nyocha maka ngwaahịa ha.
Etu esi enyere Google Ratings aka
Ọ bụrụ na Google achịkọta data nyocha zuru ezu maka ngwaahịa gị, ọkwa ga-apụta na ndepụta gị na akpaghị aka. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ijide n'aka na ọkwa ahụ ga-adịkwa mgbe oge amara ahụ, nwere ike mezue ọkwa ọkwa ngwaahịa taa.
Ọ bụrụ na azụmahịa gị na-eji PLAs, nke a bụ otu ohere iji nweta uru. Ezi ntụle dị na ndepụta gị bụ otu ụzọ iji dọta ma nyere ndị na-azụ ahịa aka mkpebi ha. Ranye ọkwa na-adịghị mma, n'otu aka, nwere ike ịdọrọ anya nke ukwuu na ngwaahịa gị. Ya mere buru n'uche na ntụle gbanwere oge. Continunọgide na-anọ n’elu, ọ dịghị ụzọ ka mma isi azụ ahịa karịa inye ndị ahịa nnukwu ọrụ yana naanị ngwaahịa kacha mma. Nzube maka akara kpakpando 5 n'oge ọ bụla na maka azụmahịa gị naanị ntụziaka dị.
Tags: AdWordsadwords ahịaadwords ndepụtabazaavoiceEkomiFeefogoogle adwordsndepụta googlegoogle ngwaahịa Fimgoogle ịzụ ahịaIke Nyochandepụta ngwaahịangwaahịa ndepụta mgbasa oziNdepụta ngwaahịangwaahịa FimReevooNtughariKwadoroTụgharịaNyocha NyochaEchicheYotpo